मिस वोर्ल्ड फाइनलका लागि भोटिंग खुल्यो,श्रृंखलाका लागि माग्ने बुढाले यसरी मागे भोट ! – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityमिस वोर्ल्ड फाइनलका लागि भोटिंग खुल्यो,श्रृंखलाका लागि माग्ने बुढाले यसरी मागे भोट !
December 7, 2018 Tulasa Karki Celebrity, Entertainment, Event, News 0
मिस नेपाल २०१८की श्रृंखला खतिवडा अहिले मिस वर्ल्ड २०१८ को लागि विदेशि मुलुकमा प्रतिस्पधा गरिरहेकी छिन् । मिस वर्ल्ड अन्तरगत हेड टु हेड प्रतिस्पर्धाको दोस्रो राउन्डमा नेपालकी श्रृंखला खतिवडा सिंगापुरकी सुन्दरी भानेसासंग पराजित भएकी थिन । तर पछि उनले अर्को ‘मल्टिमिडिया’ जितिन ।
उनलाई मिस वोर्ल्ड बनाउनको लागि यतिबेला विभिन्न देश विदेश देखी लिएर अहिले पुरै नेपाल तथा नेपाली मिडिया निकै लागु परेका छन भने उनको परिवार तथा आफन्त जन पनि उनलाई हौसला प्रदान गर्न भनि चीन पुगिसकेका छन् । अब उनलाई फाइनलमा पुर्याउनको लागि भोटिंग खुल्ला भएको छ । उनले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट मार्फत भोट गर्ने तरिका लेख्दै फाइनलको लागि भोट गर्नुहोस भनेकी छिन ।
भने उनको पोस्टलाई पनि हास्य कलाकार केदार घिमिरेलेर पनि शेयर गर्दै,’ शृंखलाको लागि भोटिङ्ग खुल्यो । शेयर गर्दै भोट गर्दै गरौँ । तपाइको एक भोट वा एक शेयरले उनलाई बनाउन सक्छ मिस वर्ल्ड । —माग्ने बुढो ।,’लेखेका छन् ।